DC Nepal, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
लोकसेवाको फाराम भर्ने क्रम जारी
काठमाडौंँ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २७ गते लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि आवेदन फाराम भर्नेक्रम जारी छ । लोकसेवाका अनुसार शनिबारसम्म एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन फाराम भरेका छन्। लोकसेवा आयोगले जेठ…
१ लाख ७० हजार तिरेर मौरिसस जान हिँडेका १६ नेपाली एयरर्पोटबाटै फिर्ता
काठमाडौं । रोजगारीका लागि अफ्रिकी मुलुक मौरिसस जाने तयारीमा रहेका १६ नेपालीलाई अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट दुवई हुँदै मौरिसस जाने तयारीमा रहेका उनीहरुको पासपोर्ट विभागले जफत गरी अनुसन्धानमा पठाएको छ ।…
चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्जखण्ड विस्तार गरिने
काठमाडौँ। चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्जखण्डको बिस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत विस्तार गरिने चक्रपथको उक्त खण्डको सीमा क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाहरु हटाउन काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख अमृतमणि…
विरोधका बाबजुद पनि लोकसेवामा ७० हजारको आवेदन, समावेशीतर्फ ३० हजार
काठमाडौं । एक अपांग आदिवासी महिलाले विभिन्न समावेशी समूहअन्तर्गत महिला, आदिवासी जनजाति, अपांग र खुलातर्फ आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगको परीक्षा रोकिए लाखौँ युवायुवतीको भविष्य संकटमा…
जोशीको फाइल खोज्दै अख्तियार
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । अख्तियारले केही उच्च अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा फाइल खोजी कार्य अगाडि बढाएको हो । फाइलबारे पूर्व कर्मचारीसँग समेत अख्तियारले सोधपुछ…
समाज कल्याण परिषद् खारेजीको क्रममा
काठमाडौं। समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ। सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो। उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ…
जताततै मलको हाहाकार, किसान सँधै मर्कामा
काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसक्दा बजारमा मलको हाहाकार मच्चिएको छ । बजारमा मल नपाएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन् । मागको अनुपातमा अत्यन्त कम मल ल्याएर कनिका छरेजस्तो छरेर मलको हाहाकार मच्चाउन सरकार स्वयं लागिपरेको किसानहरूको गुनासो…
ठमेलमा आयोजित नेहा कक्करको कार्यक्रम विवादमा, आयोजक पक्राउ
काठमाडौँ । शनिवार ठमेलमा आयोजित चर्चित भारतीय गायिका नेहा कक्करको सांगीतिक कार्यक्रम विवादमा परेको छ । शनिबार कक्करको कार्यक्रम हेर्न ठमेल पुगेका सयौं दर्शक क्लब बाहिरै बस्नु परेपछि उनीहरुले प्रहरी गुहारेका थिए । २५ सय दर्शक क्षमताको क्लबमा आयोजकले क्षमताभन्दा…
थन्किए प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने विधेयक
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी अधिकार लिएका विधेयकहरू दर्ता भएर संसद् सचिवालयमा नै थन्किएका छन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता भएर संसद्मा पुग्नुपर्ने विधेयकहरू महिनौंसम्म संसद्मा पुगेका छैनन्। फागुन २८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त…
वामदेव प्युठान पुग्दा…
काठमाडौं २२ जेठ । कुनै समय वामदेव गौतम गृहजिल्ला प्युठान आउँदा बेग्लै चहलपहल बढ्थ्यो। गृहमन्त्री भएकै कारण उनको आगमनले उच्च महत्त्वको हुन्थ्यो। चुनाव हारजित जे हुँदा पनि उनी राजनीतिमा चर्चामा आइरहे। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा गौतमले प्युठान र बर्दियाबाट चुनाव…
123 Older Last ›
कांग्रेसको एक महिने जागरण अभियानका उपलब्धि के हुन् ?
पार्टीको नासो पार्टीलाई नै फिर्ता
प्रचण्डको अभिव्यक्ति, देउवाको बधाइ र एस जयशंकर
प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को बन्यो, लुट्यो, किन चाहियो विकास?
बजेट : राम्रो हुँदा हुँदैपनि विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिएन